Fanehoan-kevitry ny Filoha : “Mandrora mitsilany ireo mpanely tsaho” -
AccueilRaharaham-pirenenaFanehoan-kevitry ny Filoha : “Mandrora mitsilany ireo mpanely tsaho”
25/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fanakorontanana firenena amin’ny fomba môderina tokoa ny tsaho ankehitriny, ary anisan’ny nandaitra mihitsy tato ho ato. Tsiahivina ny zava-nitranga, izay nampikorontana ireo ray aman-dreny maro sy ny sekoly maro teto an-drenivohitra, toraka izany ihany koa ny filazana tany aloha fa norodana ny tonelina tetsy Ambanidia sy ny hafa maro. Manoloana ireo tranga izay niseho ireo dia niresaka mahakasika io fanelezana tsaho izay mampikorontana ny mpiara-monina io ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny maha raiamandreny azy “ adidin’ ny filoha amin’ ny maha raiamandreny azy no misarika ny sain’ ny vahoaka malagasy rehetra, hitandro tahaka ny anakandriamaso ny firindran’ny fiarahamonina”. Tafiditra indrindra amin’izany fidiran’ny fiarahamonina izany tokoa ny fitoniana, izay tsy sasatra ny Filoha milaza ny tokony hipetrahan’izany eto amin’ ny tany sy ny firenena. Nohazavain’ ny Filoha tokoa ny vokatr’izany tsy fipetrahan’ny fitoniana izany, izay misy fiantraikany betsaka eo amin’ny fiainam-pirenena,“misy ny manome tsiny ahy rehefa miantso foana amin’ny hisian’ny fitoniana aho, kanefa aza hadinoina fa an-taonany maro no hanangonana ny fiakatrin’ ny harikarena aorian’ny krizy, na savorovoro vao tafarina ny firenena iray, ampilaminana sy ampahatoniana, ary hiarahan’ny rehetra no ahazoana izany’’ hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Manapoizina ny manodidina tokoa ny fisian’ ny tsaho, ary ny mpiray tanindrazana ihany no voakasika sy mandry tsy lavo loha vokatr’izany “ mandrora mitsilany ireo sokajin’olona izay manaparitaka tsaho sy manome vaovao diso ho an’ny mpiara-belona . Sokajiana mihitsy ho mpanapoizina ny firenena , n’inona n’inona endriky ny fahasahiranana nolalovan’ ny firenena, n’inona tsikera sy tsy fitovian-kevitra” hoy ihany koa ny Filoha mikasika io mpanely tsaho io. Tsy ny mpanely tsaho ihany anefa no resahin’ ny filoha eto, fa na dia ny fanelezana vaovao tsy marina an-gazety aza dia “ miantoka ny fahafahana maneho hevitra sy ny fampitam-baovao ny lalàm-panorenana, saingy voafetra izany manoloana ny fahafahan’ny hafa , ary koa hiantohana ny filaminana sy ny fiandrianam-pirenena araka ny hita ao amin’ ny lalàm-panorenana andininy faha-10”.
Tsy ahitana ny marina sy ny diso ny fanelezana tsaho, hoy ny Filoha, ary mety hiteraka zavatra hafa ihany koa ny tondro molotra izay mety ho tonga hatramin’ny fitsaram-bahoaka sy ny herisetra , ka izay no anton’ny hampitandremana ny rehetra amin’ny tsaho “ te hampitandrina ny vahoaka malagasy aho, hoe mitandremana isika .Aoka ianao tsy ho ampiasaina ho fitaovana hifalian’ny sasany. Nefa ny tanjon’izy ireny dia ny fitadiavana handemy fotsiny izao ny fitondrana, izay ho lazainy avy eo fa tsy mahafehy na inona na inona intsony. Fandemen-tsaina izany mba hisarihana anao tsy hankato ny fahefana misy, tsy hanome hasina intsony ny mpitandro filaminana, ka hiantsoan’ ny mpiara-monina anao izay tiany atao, ary tsy misy mpifehy intsony amin’izany” hoy ny filoha. Ireo izay mpanakorontana tokoa amin’ny alalan’ ny tsaho dia tsy mijery velively ny tombontsoan’ny firenena sy ny fiarahamonina, satria dia mitoetra eo foana izany, ary ny mpitondra no mandalo. Anton’ny fanentanana sy ny fanabeazana tokoa ny fiarahamonina izany “ mandalo ny mpitondra fa ny fiarahamonina sy ny firenena dia mitoetra. Mora ny mandrava fa sarotra ny manarina, raha asavorovoron’ny tsaho ny iray tanàna dia azontsika an-tsaina ny fiantraikany”. Tsy mitazam-potsiny ireo mpanely tsaho, izay manakorontana ireo anefa ny fitondram-panjakana fa mandray andraikitra, “tsy afaka ny hitazana fotsiny ny fanjakana fa mandray ny andraikiny amin’ ny fampiharana ny lalàna, ho an’ireo minia manely tsaho rehetra, indrindra amin’ ny tambazotra sosialy. Misy ny sazy izay voatondron’ny lalàna ho azy ireny, ary hampiharin’izy ireny”.
Noho izany dia nanambara ny Filoha fa “mila vaovao tena marina ny vahoaka, ka ampirisiako ireo tompon’andraikitra rehetra hanome izany amin’ny fomba mangarahara, na mivantana amin’ ny vahoaka, na ihany koa amin’ny alalan’ny teknolojiam-pifandraisana”. Mba ahafahana manamafy ny fanentanana sy ny fanazavana moa dia tsy nikely soroka ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa nanafatra ireo minisitera isan-tokony amin’izany fahazoana vaovao izany, “ny hitako izao dia misy ny minisitera tsy manavao ny tranonkalam-pifandraisana ao aminy, na ny mise à jour, omeo vaovao ara- potoana ny olona , satria mety izay ihany koa anie no fototry ny tsaho sy ny vaovao tsy marina tonga any an-tokantrano “. Ho an’ny fiarahamonim-pirenena kosa dia nambaran’ny filoham-pirenena fa malalaka izy ireo amin’ny asa ataony, ary miparitaka manerana ny nosy , tsy ny politika ihany anefa no tokony hodinihan’ izy ireo hoy ny Filoha, fa indrindra ny fanabeazana ny olom-pirenena handanjalanja ny zava-miseho eo amin’ny fiarahamonina. “Fiarovana ny zon’ olombelona, ary tokony ho sahaninareo ihany koa ny fiaravona azy ireo tsy andairan’ ny tsaho” hoy ny Filoha raha nampita hafatra ho an’ny fiarahamonim-pirenena, ary tsy izany ihany fa eo ihany koa ny lafin’ny tsikera “ tsara ny fitsikerana raha mitondra vahaolana miaraka amin’ izany koa, fa tsy hoe mijanona amin’ izany hoe fitsikerana fotsiny “. Ankoatra izany, hafatry ny Filoham-pirenena ho an’ny fiarahamonim-pirenena dia misy ihany koa ny hafatra ho an’ ny mpanao gazety “ho anareo mpampita vaovao, dia averiko ihany fa safidy masina no noraisinareo , aza ahodinkodina any amin’ ny fihantsiana ampiharana ny lalàna ny asanareo, malalaka ianareo ka omeo vaovao marina ny mpijery sy ny mpihaino mba ho modely ianareo” . Ho an’ ireo mpampiasa tambazotra sosialy kosa indray, dia izao no hafatry ny Filoham-pirenena “ ho anareo mpampiasa tambazotra sosialy rehetra, tsy voafetra ny fampiasana izany eto amintsika, ka ampiasao hanasoavana ny mpiara-monina sy ny firenena itony fitaovana itony, ka tsy avy amin’ izany no hiaingan’ny savorovoro ara-tsaina ho an’ ny mpiray tanindrazana” hoy ny filoha namarana ny hafatra ho an’ireo rehetra izay voakasiky ny lafin’ny serasera. Teny am-pamaranana moa dia nohamafisin’ny filoha amin’ny maha raiamandreny azy eto amin’ny firenena no ilazany ireo rehetra ireo
Ramatoa be efa nahazohazo taona no novonoin’ny lehilahy mpifoka rongony iray tamin’ny fomba feno habibiana.Tsy iza no nahavanona izany fa ny zafikeliny ihany. Notapahin’ity tovolahy 25 taona ity tamin’ny antsy lava lela ny lohan’io renibeny ...Tohiny